ဝေဒသိပ္ပံအက်ဆေး - ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက tovp2016@gmail.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် TOVP ဝေဒသိပ္ပံစာစီစာကုံးတွင်ဖော်ပြထားသောဝေဒနက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များအားလုံးသည် TOVP mာဗေဒဌာန၏အမြင်များကိုကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။
မှတ်ချက် - TOVP Book Marketplace သည် Amazon.com (အမေရိကန်တစ်ခုတည်းမှသာ) မှ ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးသည် Amazon Affiliates Program မှတဆင့်မူပိုင်ခွင့် ၁၀၁TP1T အထိရှိသည်။
Cosmology & နက္ခတ္တဗေဒ
Karma & ဝင်စား
Richard L. Thompson မှ (Sadaputa Das) မှ
အဆင့်မြင့်လေ့လာရေးများအတွက် Bhaktivedanta Institute မှဖွငျ့ဖွစျသညျ
ဒေါင်လိုက်အတိုင်းအတာနှင့် Puranic iverseာ၏အရွယ်အစား
Ashish Dalela (Rsiraja Das) မှ
သက်ရှိကိုယ်ခန္ဓာ၏ Ayurveda မော်ဒယ်
Srimad Bhagavatam ရှိအာကာသသည်ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာတွင်အာကာသနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏စက်ယန္တရား: Gear ထဲက?
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် - သီအိုရီတစ်ခုရှာဖွေရန်အယူဝါဒ
တစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာရှေးဟောင်းသုတေသန၏ Insider ရဲ့အမြင်
မျိုးစိတ်များ - ဝေဒအမြင်
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ယန္တရား - သူတို့သဟဇာတဖြစ်ပါသလား
Chaos ရှိ Clockwork Unာ
အဆိုပါ Broken Watchmaker
The in the Machine in the Ghal on Dialogue
ဦး နှောက်ထဲက Little ကလူ
Bhakti-yoga: Nonmechanistic သိပ္ပံ၏နည်းလမ်း
Bhakti-yoga: Nonmechanistic သိပ္ပံနည်းကျနည်း (အပိုင်း ၂)
Bhakti-yoga: Nonmechanistic သိပ္ပံနည်းကျနည်း (အပိုင်း ၃)
Stephen Knapp မှ (သီရိနန်ဒန်ဒါဒါ) ။
ဂါထာ - ဒီခေတ်အတွက်လိုအပ်ချက်
သခင်ဘုရား Krishna ဟိန္ဒူ၏ဂုဏ်အသရေ
Krishna ဟိန္ဒူ၏ထာဝရဝိညာဏနေရာ - ကျွန်ုပ်တို့၏အန္တိမရည်မှန်းချက်
စတီဗင်ဂျေရို (Satyaraja Das) မှ
ယောဂ၊ Bhakti နှင့်ဘဝ၏တိုက်ပွဲ
Soul ၏လှုပ်ရှားမှု - Krishna ဟိန္ဒူသိစိတ်၌ကခုန်ခြင်း
Krishna ဟိန္ဒူသိစိတ် - ရွှေအခွင့်အလမ်း
အဆိုပါသိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်း - ဒါဟာအမှန်တရားကိုကယ်နှုတ်တော်မူသလား
Guna နှင့် Karma ၏သံသရာ
Guna နှင့် Karma ခန္ဓာကိုယ်ဖန်တီးပုံ
ဝင်စားခြင်း - ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြခြင်း
Vedic Science ဆိုတာဘာလဲ?
သိပ္ပံနည်းကျသီအိုရီ၏ Nyaya Conception
Soul of Manifestation နှင့်သူတို့သွားရာအရပ်
ဝေဒယဉ်ကျေးမှု / ဟိန္ဒူဘာသာ - အတိုနိဒါန်း
ရှုထောင့် - တိုက်ပွဲ (သို့) ပျံသန်းမှု - သောမတ်စ် Merton နှင့် Bhagavad Gita
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအံ့: ဖွယ်ရာဘုရင် Yudhishthira နှင့်သေမင်း Mistery
PAVARGA - သင်ျခြာကျရှိသှနျသငျခကျြနှငျ့ပတျသကျသောအရာဝတ္ထုများရှိခြင်း
ပထမဆုံးဘယ်သူလဲ Vishnu or Krishna?
ကမ္ဘာ့ဖလား: ဝေဒ vs. အနောက်တိုင်း
Aryan Invasion Theory: ခေါင်းတလုံးထဲရှိနောက်ဆုံးလက်သည်း
Michael A. Cremo မှ (Drutakarma Das) မှ
တားမြစ်ထားသောရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ - သိပ္ပံ၊ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့တွင်ခန္ဓာကိုယ်သုံးခုပါဝင်မှု
အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရှိ Ranganatha ဘုရားကျောင်း၏ရှေးဟောင်းသမိုင်းကြောင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း